HNAC ọgụgụ isi ọrụ na mmezi azụmahịa Mmụba ndetu: Beijiao Town Pumping Station Electric, excitation and DC System Maintenance Project-News-HNAC Technology Co., Ltd
HNAC nwere ọgụgụ isi ọrụ na mmezi azụmahịa ndetu ndetu: Beijiao Town Pumping Station Eletriki, ihe mkpali na ọrụ mmezi sistemu DC
Oge: 2021-07-07 Hits: 28
Ịtụkwasị obi na uru nke dum ụlọ ọrụ yinye, a siri ike teknuzu ikpo okwu, a ọkachamara ọrụ na mmezi otu, a tozuru okè management usoro na nkà mmụta sayensị ọrụ na mmezi ụzọ, HNAC enyela mmiri conservancy, hydropower, mgbanwe na nkesa, ike nkesa netwọk, gburugburu ebe obibi. nchebe mmiri ọgwụgwọ, na ume ọhụrụ. Ndị ọrụ na mpaghara ndị ọzọ na-enye ọrụ akụrụngwa, nrụzi na nrụzigharị iji nyere gị aka dozie nsogbu dịka ndị ọrụ, njikwa, teknụzụ na uru. Enyere HNAC ihe nrite onye na-edu ndú nke ọrụ ọgụgụ isi na mmezi na China na June 2021.
Iji na-ejere ndị ahịa ozi nke ọma, HNAC na-eche mkpa dịgasị iche iche nke mmepụta ume na oriri ume, na iji teknụzụ ozi dị ka ịntanetị nke ihe, nnukwu data na ọgụgụ isi, e wuru ụlọ ọrụ data IoT nke ọtụtụ ume iji nweta miri emi mwekota nke ike eruba na ozi eruba. Ka ọ dị ugbu a, ejikọtala ebe data ahụ na ọtụtụ narị saịtị iji duga ọrụ nchekwa na ịrụ ọrụ nke ọma nke osisi ndị ọrụ.
Na 2018, ụlọ ọrụ ahụ rụrụ ọrụ eletriki, mkpali na ọrụ nhazi usoro DC nke ọdụ ụgbọ mmiri 13 na Beijiao Town. Na a ụda mmezi na mmezi usoro nlekọta na ezi ọkachamara àgwà nke na-na saịtị na-arụ ọrụ na mmezi pesonel, ụlọ ọrụ na-eji ikenyeneke teknuzu ịzụlite eletriki, excitation na DC usoro, wdg A na-enyocha akụrụngwa mgbe niile ma nọgide na-enwe . N'otu oge ahụ, ọ na-arụ ọrụ mberede maka oke mmiri ozuzo na idei mmiri iji nweta nzaghachi ngwa ngwa maka ihe mberede ma hụ na arụ ọrụ dị mma na nke kwụsiri ike nke ọdụ ụgbọ mmiri 13. N'ihi nke a, onye were anyị n'ọrụ nyere anyị ọkwa dị elu na otuto. Mgbe nkwekọrịta ahụ gwụchara, ọ meriri ebe mbụ na ntinye aka wee megharịa nkwekọrịta mmezi maka ọkụ eletrik, mkpali na usoro DC nke ọdụ ụgbọ mmiri 19 dị na Beijiao Town.
Ọnụ ọgụgụ nke oru ngo
Site na 2018 ruo 2020, ọrụ na ịrụ ọrụ na-arụ ọrụ na-agụnye akụrụngwa nkesa ụlọ ọkụ nke ọdụ ụgbọ mmiri 13, ọnụ ọgụgụ ya bụ 23 transformers, 75 high-voltage cabinets, 54 low-voltage cabinets, 16 capacitor cabinets, 29 excitation devices and DC ihuenyo;
Site na 2021 ruo 2023, a ga-abawanye ọrụ na ịrụzi ọrụ na ọdụ ọnụ ụzọ 21 na akụrụngwa nkesa ọkụ n'ime ụlọ nchekwa mmiri, ọnụ ọgụgụ ya bụ transformers 31, igbe voltaji 92 dị elu, igbe 80 obere voltaji, 22 capacitor. kabinet, na ngwaọrụ mkpali 30 na ihuenyo DC.
Ndị otu na-arụzi ọrụ ugbu a nwere mmadụ 9, gụnyere onye ndu oru ngo 1 nwere aha etiti etiti nke electromechanical ma ọ bụ eletriki, yana ndị ọrụ nlekọta 8 nwere asambodo ọrụ pụrụ iche (electrician).
Ndị otu nlekọta na-akọ mgbe niile ọnọdụ akụrụngwa
● Na-eduzi nyocha akụrụngwa mgbe niile, ndozi, nyochagharị na ule mgbochi.
● Ọrụ mberede na nzaghachi mberede maka ihe mberede.
● Nkwado teknụzụ dị ka mgbanwe akụrụngwa na ọzụzụ teknụzụ nke ndị ọrụ na-arụ ọrụ.
● Njikwa ọgụgụ isi na njikwa ọnọdụ ahụike akụrụngwa.
Otu nrụzi maka ndozi akụrụngwa
Nke mbụ: HNAC sonyeere na ọgbakọ 12th International Infrastructure Investment and Construction Summit Forum
Ọzọ: [Akụkọ Ọrụ] Ejikọtara Chenzhou Jiucaiping Energy Storage Power Station na grid maka ịrụ ọrụ nnwale.